PIP isiXhosa Archives – Messages for Mothers
How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Ukukhathalela abantwana ukuba umzali une- COVID-19
Abantu abane- COVID-19 kufuneka bazikhethe kwabanye ukuze intsholongwane ingasasazeki iye kwabanye. Igosa lezempilo lakho liza kukuxelela ukuba uza kuzikhetha iintsuku ezingaphi. Thetha nabo ukuba kuyenzeka ukuba uzikhethe ekhaya okanye kwiziko lezempilo. Ukuzikhetha kuthetha ukuhlala kude nabanye abantu yaye ungaphumi phandle tu. Ukuba kukho nabani na ekhayeni lakho onganceda (ongenayo i- COVID-19) mcele ukuba ancede ngokukhathalela […]
How do I safely use and store sanitisers and disinfectants at home: Ukusetyenziswa kwesicoci sezandla esibulala iintsholongwane kunye nesibulali-zontsholongwane
Kukho imixube yeblitshi esetyenziswa kakhulu kunye nesicoci sezandla esibulala iintsholongwane ngeli xesha. Qiniseka ukuba AZIFIKELELWA NGABANTWANA. Musa ukubeka le mixube kwizikhongozeli apho zingacingelwa ukuba ziziselo okanye amanzi. Hlamba zonke izixhobo zokutya kunye nezinto zokudlala ekunokwenzeka bzifake emilonyeni yabo ngamanzi anesepha. Ungasuli izinto zokudlala ngemixube yeblitshi, oku kuya kuba yingozi ebantwaneni xa bezibeka emilonyeni yabo. Ungasuke […]
Ungathi kanti unexhala ngomntwana wakho ukuba ubonakala eya egula kunengqele njee okanye umkhuhlane. Mhlawumbi engatyi, ephefumla ngokukhawuleza kakhulu, engenamandla, engafuni kudlala, eshushu kakhulu yaye etyatyaza engayeki. Mhlawumbi unerhashalala, amabala ezandleni nasezinyaweni okanye ulwimi olubomvu okanye umlomo obomvu. Okanye angaba nlinye uphawu lwesigulo esiyingozi (jong incwadi yoMgaqo oya eMpilweni). Ukuba kunjalo, umntwana wakho kufuneka aye ekliniki […]
Ndingalindela ntoni ukuba umntwana wam kufuneka elele esibhedlele? Ukuba umntwana wakho akaziva kakuhle yaye kufuneka alale esibhedlele, ugqirha uza kuthatha iswabhu yokwenza uvavanyo ayifake empumlweni yomntwana wakho kunye/ emlomnyeni ukuvavanya intsholongwane eyenza i- COVID-19. Le yinto engavakali kamnandi ayidli ngakuba buhlungu. Iziphumo zidla ngokuvela emfa kweentsuku ezi 2-3. Abongikazi noogqirha abakhathalele umntwana wakho baza kunxiba […]
Are there any risks for children who get ill with COVID-19: Iingxaki zempilo zexesha elide nabantwana
Ukuba abantwana banengxaki/iingxaki zempilo zexesha elide, bangagula kakhulu yi-COVID-19. Aba ngabantwana abaneengxaki zempilo ekufuneka babone oogqirha okanye baye ekliniki rhoqo. Eminye imizekelo: ngabantwana abanesifo seswekile, intliziyo, isifo sokuminxana isifuba, isifo seswekile, umhlaza, isifo sezintso, isifo semvakalelo yengqondo kunye nesandulela sikagawulayo. Ukuba umntwana wakho unezinye zezi meko, kufuneka bahlale ekhaya yaye angadibani nabanye (abantu abadala nabantwana). […]
How does COVID-19 affect babies and children: Igalelo le- COVID-19 eZintsaneni kwanaseBantwaneni
Ingaba i-covid-19 iyazichaphazela iintsana kunabantu abadala? Iimpawu ze-COVID-19 ziyafana ebantwaneni kunabantu abadala? Iimpawu ezifana nengqele kunye nomkhuhlane: umntwana anganawo umkhuhlane, imifinya emanzi kunye nokukhohlela. Ngamanye amaxesha bayagabha futhi babenotyatyazo.
What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Ukusasazeka kokusuleleka
Abantwana neentsana bangayifumana i- COVID-19? Ewe, abantwana bangayifumana i- COVID-19, KODWA mancinane amathuba okuba bayifumane kunabantu abadala. Ezi ziindaba ezimnandi! Usana lwam okanye umntwana wam angayigqithisa kum i- COVID-19? Kungenzeka, KODWA oko kwenzeka kumathuba ambalwa kunokusasazeka okusuka emntwini omdala ukuya emntwaneni. Oku ziindaba ezimnandi!
Ukongeza ekunxibeni isifonyo, ebantwaneni abangaphezu kweminyaka emibini nangaphezulu Khumbuza abantwana bakho ukuba bazibhekelise kude ngokugcina iimitha enye ukuya kwezimbini kude nabanye abantu, kuquka nabahlobo babo. Ungazisebenzisi izixhobo zalapho kudlalwa khona okanye ezinye izinto ekungathi kanti zibanjwe ngabahambi. Sebenzisa isibulali-zintsholongwane rhoqo ezandleni yaye hlamba izandla zabantwana bakho xa bebuya ekhaya. Fundisa abantwana bakho: Sisetyenziswa njani isicoci sezandla esibulala iintsholongwane: […]
Kuxhomekeka ukuba babe “kufutshane kakhulu” okanye hayi, “Ukuba kufutshane kakhulu” ngumntu obengaphantsi kwemitha kufutshane nomntwna wakho ixesha elingaphezu kwemizuzu eli-15 yaye ukuba mhlawumbi omnye wabo okanye bobabini bebenganxibanga sifonyo. Ukudibana nomnye ekhaya: kuya kuba kukudibana yayeumntwana wakho kufuneka ahlale ekhaya iintsuku ezili 14, nokuba baphilile yaye ababonakalisi naziphi na iimpawu ze-COVID-19. Ukudibana ekhaya: Ukuba umntu […]
How can I prevent my child passing on COVID-19 at home: Kungenziwa ntoni ukunqanda umntwana wam ukuba asasaze i-covid 19 ekhaya?
Ukuba kukho umntu ongaphezu kweminyaka engama 65 ekhaya okanye umntu omkhulu kakhulu okanye onesigulo esifana nesifo seswekile, uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye isfo samaphaphu: Bonke abantwana abangaphezu kweminyaka emibini kufuneka banxibe isifonyo yaye bagcine umngama okhuselekileyo (iimitha ezimbini ) ukusuka kuloo mntu usemngciphekweni. Umntu osemngciphekweni kufuneka asebenzise itawula yakhe, ikomityi, amacephe nezinye izinto zokutya kunye nezinto […]